Ndị na-egwu bọọlụ Scottish
Ndị na-egwu bọọlụ Norwegian
Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Algeria
Ndị na-egwu bọọlụ Oceania
Ndị na-egwu bọọlụ Turkish
Ndị na-agba bọl
AllNdị egwuregwu bọọlụ BekeeNdị na-egwu bọọlụ ScottishNdị egwuregwu bọọlụ Welsh
Ademola Lookman Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ben Godfrey Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Emile Smith Rowe Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Rhys Williams Childhood Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu
AllNdị egwuregwu bọọlụ na BeljọmNdị egwuregwu bọọlụ CroatianNdị egwuregwu egwuregwu Czech RepublicNdị egwuregwu bọọlụ DanishNdị egwuregwu bọọlụ DutchNdị egwuregwu bọọlụ FranceNdị egwuregwu bọọlụ GermanNdị egwuregwu bọọlụ ItaliantaliNdị na-egwu bọọlụ NorwegianNdị egwuregwu bọọlụ PortugueseNdị na-egwu egwuregwu bọọlụ SpanishNdị egwuregwu bọọlụ Switzerland
Jules kounde Storymụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Dominik Szoboszlai Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Leandro Trossard Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
AllNdị na-egwu egwuregwu bọọlụ AlgeriaNdị egwuregwu bọọlụ nke CameroonNdị egwuregwu bọọlụ GhanianNdị egwuregwu bọọlụ Ivory CoastNdị egwuregwu bọọlụ NigeriaNdị egwuregwu bọọlụ Senegalese
Josh Maja Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Franck Kessie Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Yves Bissouma Storymụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Boulaye Dia Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
AllNdị na-egwu egwuregwu bọọlụ ArgentineNdị egwuregwu bọọlụ BrazilNdị egwuregwu bọọlụ CanadaNdị na-egwu egwuregwu bọọlụ ColumbianNdị egwuregwu bọọlụ United StatesNdị egwuregwu bọọlụ Uruguayan
Yerry Mina Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ronald Araujo Storymụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
AllNdị na-egwu bọọlụ OceaniaNdị na-egwu bọọlụ Turkish
Cengiz N'okpuru Storymụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
AllNdị na-agba ọsọ agba agbaNdị na-agba bọlNdị na-elekọta bọl
Dean Smith Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ralph Hasenhuttl Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Hansi-Dieter Flick Storymụaka Akụkọ Ihe Mere Eziokwu Akụkọ Ndụ
Ronald Koeman hoodmụaka Akụkọ Ihe Mere Ezigbo akụkọ ndụ Ezughị oke
Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Ọ bụ Alisson Becker Child Story Plus Ihe Ndị Na-adịghị Eke Ọhụụ
LB na-egosi Full Story of a Brazilian kasị mara aha ya bụ “Messi nke ndị na-eche nche“. Anyị Alisson Becker Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndabere ezinụlọ ya, mmekọrịta mmekọrịta ya, na ihe ndị ọzọ OFF-Pitch (amachaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara ọ bụ onye na-eche nche na Brazil na klaasị. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Alison Becker's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Alisson Becker nwa akụkọ akụkọ na -Ndụ mbido
Alisson Ramses Becker mụrụ na 2nd ụbọchị nke October 1992 nne ya, Magali Lino de Souza Becker na nna, José Agostinho Becker (onye na-ere ahịa ala na steeti) na steeti Rio Grande do Sul, Brazil.
Ndị nne na nna Alisson Becker sere aka nri ke ndise emi ẹkedude ke ufọk ye ufọkn̄wed ye kpukpru mbon oro ẹkedude ke ukot.
Ya na nwanne ya okenye bụ Muriel, Alisson na onye òtù ezinụlọ ya dum amụrụ Catholic okwukwe nke Iso Ụzọ Kraịst.
Otú E Si Malite Football: N'ịmara mkpa ọ dị ịgba bọl na Brazil, ndị nne na nna Alisson Becker nwere mmasị na mbụ ime ka ụmụ ha nwoke sonye na egwuregwu ahụ. Ma Alisson na nwanne ya nwoke nke okenye, Muriel Gustavo, onye dị afọ isii toro ịhọrọ akụkụ nke ịghọ ndị na-eche nche na mbido ọrụ ha.
Alisson Becker nwa akụkọ akụkọ na -Mkparịta ụka Nwanna ahụ
Maka ndị nne na nna Alisson Becker, Academylọ akwụkwọ mmuta nke Brazil Sport Club International bụ ebe kacha mma maka ụmụ nwoke abụọ ka ha na-arụ ọrụ ha. Muriel (nke dị n'okpuru) bụ onye 6 bụ okenye toro n'ọgwụgwụ nke ọrụ ntorobịa ya bụ nke sitere na 2003 ruo 2006.
Alisson batara na 5 afọ mgbe e mesịrị, na afọ 2008. Ndị nne na nna ruo ụbọchị anaghị akwụsị ikwu banyere mmetụta nke ịja ụmụ ha mma. Nke a mere n'otu oge mgbe Allison gụsịrị akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ bidoro ịlụ ọgụ na nwanne ya nwoke nke okenye maka ọrụ ịhọrọ oke nchekwa. Dona Magali Lino de Souza Becker nne ha na N'ajụjụ ọnụ kwetara n'oge na-adịbeghị anya na ọ siri ike ịhụ ka ụmụ ha nwoke abụọ na-asọ mpi maka ọnọdụ nke usoro mmalite. N'okwu ya;
Nke ahụ siri ike nke ukwuu. Chọrọ ịhụ ka ha abụọ ga-abanye na ntinye mmalite? Oleekwa otú nke ahụ ga-esi kwe omume? Magali jụrụ.
Alisson Becker nwa akụkọ akụkọ na -Ịbụ Onye Okenye Ya
N'ime ụmụnne, ọ bụ Becker nwere mkpebi siri ike karị ime ka nrọ ya mezuo. O meriri asọmpi ahụ maka ebe mbụ mgbe nwanne ya nwoke merụrụ ahụ nke mere ka ọ pụọ na otu nwa oge. Mgbe Muriel laghachiri na mmerụ ahụ, Alisson enwetala ịrị elu meteoric wee bụrụ nke a na-apụghị ịgbanwe agbanwe. Nke a dugara na Muriel nara nhọrọ mgbazinye ego na 2009 mgbe ọgụ otu afọ na nwanne ya nwoke gasịrị.
Inghụ ka nwa ha nwoke na-asọ mpi na n'ikpeazụ na-abịa na okwu bụ ihe ma Magali ma ọ bụ di ya, José Agostinho Becker nwere ike ibu amụma banyere esemokwu ụmụ ha. Otú ọ dị, e nwere nnukwu nkwado maka ma ndị mechara nwee obi ụtọ maka ibe ha.
N'ihe ole na ole mgbe ọ hapụsịrị ụlọ ọrụ ahụ, Muriel megheere ndị mgbasa ozi na-ekwu;
Amaara m otú o si eche na ọ ga-efunahụ m. Ma enwere m obi ụtọ na ọ bụ obere nwanne m nwoke nke wepụrụ m ya.
Alisson Becker Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Echiche Eziokwu- Imeri Dida
Ka oge na-aga, ọchịchọ Alisson ka ndị European European hụrụ ya wee bụrụ ihe na-agaghị agafe agafe, mana ọ bụ eziokwu a na-enweta site na ịrụsi ọrụ ike. Ọ maara na ịgbachitere bụ azụmahịa siri ike maka ndị na-egwu egwuregwu na Europe ịkwụ ụgwọ. N'agbanyeghị echiche ahụ, Alisson nyere ihe kachasị mma.
Ọ bụ afọ 2012 mgbe Dunga kụziiri ọgbakọ ahụ na-agbanye ígwè na e nwere ezigbo obi abụọ banyere egwuregwu na ndị na-eche nche na-anọgide na-enwe ntụpọ n'ihi asọmpi siri ike.
Ọganihu Alisson Becker dị ukwuu mgbe ọ na-agba akaebe Brazilan onye bụbu onye mgbaru ọsọ Dida bụ onye bịara ụlọ klọmp ka ya na ya nwee ike ịlụ ọgụ, ma mgbe ọ hụrụ na nwatakịrị bụ Alisson Becker na-arụsi ọrụ ike na ezumike nká na 2015.
Alisson Becker Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Echiche Eziokwu- Na-eto Eto
Mgbe amanye Dida n'ime ezumike nká, Alisson malitere inweta nnukwu aha nke ndị nwere mmasị na Europe na-esochi ya. Ikike ya iji mesoo onye a ma ama dị ka ikike ya ịgbatị mmiri ya, si otú a na-egbochi bọọlụ niile pụọ na net.
Ọ bụ ndị Rom nke dị n'akụkụ Italy nke mesịrị merie agbụrụ ahụ iji banye Alisson Becker. Mgbe ọ nọ na Roma, Alisson kọrọ na enwere nkụda mmụọ n'ihi oge ezughị oke ya mgbe ọ na-egwuri egwu na Wojciech Szczesny.
N'ịdabere na ahụmịhe gara aga, Alisson gafere ụzọ ya iji wepụ Szczesny bụ onye hapụrụ mmalite ya wee manye ya ịhapụ ọgbakọ ahụ maka Juventus onye chọrọ nkwado ndabere maka ndị agadi Gianluigi Buffon.
Mgbe Loris Karius nke Liverpool nwere nhụsianya nke 2017/2018 Champions League nke gbara nro, Liverpool malitere nyocha ha maka onye mgbaru ọsọ ọhụrụ. Alisson Becker bụ naanị onye chọrọ iji ntụkwasị obi dochie ndị na-eche nche bọọlụ.
Na 19 July 2018, mgbe ọ dị afọ 25, e gosipụtara Alisson Becker ịbụ onye na-eche nche Liverpool.
Mgbe ọ dị afọ 25 nke aka ya na-egosi, Alisson ghọrọ onye na-elekọta ihe mgbaru ọsọ dị oké ọnụ ahịa oge nile, na-akarị ihe ndị na-enyefe Ederson Moraes (Onye na-elekọta ihe mgbaru ọsọ kachasị mma nke akwụ ụgwọ ya na paụnd sterling) Gianluigi Buffon (onye akwụ ụgwọ ụgwọ na Euro). Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Alisson Becker nwa akụkọ akụkọ na -Ndụ mmekọrịta
N'etiti onye ọ bụla mara mma na Brazil, enwere nnukwu nwanyị, yabụ okwu ahụ na-aga. N'okwu a, n'azụ Alisson Becker na-aga nke ọma, ọ dị otu enyi nwanyị mara mma nke aha ya bụ Natalia Loewe (nke dị n'okpuru) onye mechara bụrụ nwunye ya.
O doro anya na ụdị ndụ Alisson Becker si na pitch na-ewuli elu zuru ezu banyere ya. Dị ka otu akwụkwọ si kwuo, Alisson maara nwunye ya bụ Natalia Loewe kemgbe ọ dị afọ iri na ụma mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Mgbe Alisson gara n'ihu na-elekwasị anya na football, Natalia hụrụ onwe ya site na ụlọ akwụkwọ iji ghọọ dọkịta dị ka ihe akaebe na-ekpughe n'okpuru.
Dị ka usoro mgbasa ozi si kwuo, ma ndị hụrụ ya n'anya malitere ịlụ na 2012, afọ Alisson mechiri ọrụ ntorobịa ya na Internacional. A kwadoro nke a dị ka Becker na-ekerịta akwụkwọ Instagram (lee n'okpuru) na 9th nke September, 2016 na ntụgharị ntụgharị;
“Ekele anyị, ịhụnanya m !! Foto a na-ekwu maka onwe ya, mana achọrọ m ịgwa gị na ahụrụ m gị n'anya nke ukwuu, enwere m obi anụrị n'akụkụ gị !! Afọ 4. ”
Lee maka onwe gi n'okpuru;
Foto dị n'elu gbara otu afọ mgbe ha lụsịrị agbamakwụkwọ ha nke mere na 2015. Di na nwunye ahụ nwere nwa nwanyị aha ya bụ Helena onye amụrụ na 2016.
Alisson gosipụtara, oge na-enweghị nọmba otú di na nna ya dị ebube. Ewezuga ịnọ n'ebe ahụ maka nwunye ya ọ hụrụ n'anya ka ọ na-amụ nwa, onye nlekọta nchebe nke Brazil makwaara na ọ na-enwe obi ụtọ nke obere Helena.
Nwa ya nwanyị Helena bu ezigbo ihe mmuta nye Becker bu onye eji eziputa foto ya. N'okpuru ebe a bụ otu n'ime nke gosipụtara ya banyere ịtụba ya n'ime ikuku.
Birthbọchị ọmụmụ bụ oge pụrụ iche na-akpọ oku maka ememme maka ezinụlọ Becker. N'okpuru bụ foto nke nne na nna mara mma nke na-eme ụbọchị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ Helena.
Maka Alison, ihe nile banyere ọrụ ya na igosi na ọ ga-akwado mmeri ya.
Alisson Becker nwa akụkọ akụkọ na -Eziokwu nke Onye
Jizọs Kraịst Lee:
Ozugbo ị hụrụla ọdịdị ya dị n'elu, ị gaghị enwe ike ịchọpụta ya. Foto Alisson Becker dị n’elu dị ka Jizọs Kraịst.
Banyere nkịta ya:
Na-enyere nwunye ya na nwa ya aka, nke Alisson nkịta bụ nanị ihe dị n'ụwa nke hụrụ ya n'anya karịa ka ọ hụrụ onwe ya n'anya.
Nyochaa: Daalụ maka ị gụọ akwụkwọ Alison Becker nke nwata anyị na akụkọ nke eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Egwuregwu Ndị Rom na-akwado
Curtis Jones hoodmụaka Akụkọ Ihe Mere Ezigbo akụkọ ndụ
Lorenzo Pellegrini Akụkọ banyere nwatakịrị gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Brendan Rodgers Akụkọ nwata na gbakwunyere ihe ndị ọzọ gbasara akụkọ ndụ ha
Joel Matip Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
Nicolo Zaniolo Nwa akwukwo n'akwukwo ihe omuma
Bọchị gbanwee: Jenụwarị 1, 2021
Bọchị agbanwee: Ọktọba 17, 2020
Bọchị agbanwee: February 28, 2021
Bọchị agbanwee: February 2, 2021
Bọchị agbanwee: Ọktọba 25, 2020
Bọchị agbanwee: Ọktọba 22, 2020
Bọchị agbanwee: Disemba 26, 2020
Nweta Akụkọ bọọlụ na Igbe mbata gị.